गोरखा । गोरखा क्षेत्र नम्बर २ मा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले अग्रता फराकिलो बनाएका छन् । विहान ७ बजे सार्वजनिक भएको आधिकारिक निर्वाचन परिणामअनुसार बाबुरामले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई करीव ११ सय मतले पछि पारेका थिए । पछिल्लो अपडेट अनुसार बाबुरामले ६ हजार ५३४ मत पाउँदा नारायणकाजीको ५ हजार ३९९ मत छ । गोरखा क्षेत्र नम्बर १...
मकवानपुर । मकवानपुरमा आज विहान ८ बजे सर्वदलीय बैठकपछि मतगणना हुने भएको छ । सबै मतदान केन्द्रबाट हिजो राती ३ बजेसम्म मकवानपुरमा मतपेटिका सदरमुकाम हेटौडा ल्याइएको जनाइएको छ । मकवानपुरका ३ सय २४ मतदान केन्दबाट मतपेटिका मतगणना स्थलमा ल्याइएको हो । निर्वाचन मकवानपुरमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएका छन् । मतदानका लागि मकवानपुरमा २ हजार ५ सय...
मकवानपुर । पहिलो चरण मंसिर १० गते चुनाव भएका ३२ जिल्लाका ३७ स्थान को प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएको छ भने तीन स्थानको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ। समाचार तयार पार्दासम्म प्रतिनिधि सभामा एमाले उम्मेदवार मनाङ र मुस्ताङमा विजयी भएका छन्। माओवादी केन्द्र रुकुम पूर्वमा विजयी भएको छ। प्रदेशतर्फ पनि तीन क्षेत्रको परिणाम अाएको छ।...
गोरखामा बाबुराम भन्दा नारायणकाजी अघि
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तर्गत पहिलो चरणमा निर्वाचन सपन्न भएको गोरखा-२ को प्रारम्भीक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ । र नयाँ शक्तिका संयोजक बाबुराम भट्टराई पछि परेका छन् बाहिरिएको मत परिणामअनुसार माओवादी केन्द्रका नारायणकाजी श्रेष्ठले १८२४ मत ल्याएका छन् । त्यस्तै बाबुराम भट्टराईले १७८९ मत प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म ३८७२ मत...
विवेकशील साझाको आभार
मकवानपुर । आज सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफूलाई मतदान गर्ने मतदाताप्रति विवेकशील साझा पार्टी मकवानपुरले आभार व्यक्त गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक महेश पाठकले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मतदाताप्रति आभार व्यक्त गरेको हो ।...
मकवानपुरमा ६५ प्रतिशत मत खस्यो !
मकवानपुर । प्रतिनिधी तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन मकवानपुरमा शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको छ । मकवानपुरको एक सय ६४ वटा मतदान स्थलमा ३ सय २४ वटा मतदान केन्द्रबाट मतदान भएको हो । मकवानपुरमा ६५ प्रतिशत मत खसेको पारम्भिक अनुमान गरिएको छ । मतदानका लागि २ हजार ५ सय ९५ जना कर्मचारी खटिएका थिए । त्यसैगरी एक हजार ७ जना जनपथ प्रहरी, एक हजार ३ सय २८ जना...
‘बम विष्फोटमा विप्लव र भगौडा प्रहरी’
मकवानपुर । चुनावका बिचमा विभिन्न स्थानमा भएका बम विष्फोटको जिम्मेवारी नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले लिएको छ । चुनावका क्रममा ती घटना भएकाले चुनाव सकिएपछि अब बम विष्फोटका सबै घटना रोकिने उसले जनाएको छ । जनताको चाहाना विपरित चुनाव गरिएकाले आफूहरु बम फड्काउन बाध्य भएको पार्टीका नेता ओमप्रकाशन पुनले जनाए । चुनाव सकिएसंगै...
भोट हाल्दै यसो भने राष्ट्रकवि घिमीरेले
काठमाडौं । राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरलेले चुनावमा आफ्नो मतदान गरे । आफ्नो मतदान पछि उनले मुलुक अब नयाँ युगमा प्रवेश गरेको प्रतिकृया दिए । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा लैनचौररस्थित जनकनाथ उच्च माविको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्दै ९९ वर्षीय राष्ट्रकवि घिमिरेले अब नेपाल स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले...
१०७ वर्षीया नन्दकुमारीले गरिन् मतदान
मकवानपुर । प्रतिनिधी तथा प्रदेशसभाको जारी चुनावमा देशका विभिन्न ठाउँमा उत्साहपूर्वक रुपमा नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरिरहेको खबर छ । ज्येष्ठ नागरिकहरु पनि चुनावमा उत्साहपूर्वक सहभागी बनेका छन् । झापाको दमक–८ जनता आधारभूत विद्यालय केन्द्रमा १ सय ७ वर्षिया नन्दकुमारी अधिकारीले मतदान गरेकी छन् । आफूले देश बनाउँनका लागि...